Umshini Wokupholisa Umshini Wangaphandle ophoqa umshayeli wokupholisa ophoqa ama-motors kagesi
Ukupholisa Abalandeli Bezimoto
Bheka Umsebenzi Wethu
Singumkhiqizi wokupholisa fan fan
I-generator ikhiqiza ukushisa okukhulu lapho ijikeleza ikhiqiza ugesi, futhi umoya obandayo kufanele udlule phakathi kwe-stator ne-Rotor. Ngakho-ke, kuzoba khona ama-fan blades ngakolunye uhlangothi lwe-generator. Amashubhu we fan elinejubane elikhulu kufanele aqhume umoya opholile, futhi kufanele kube khona amanye ngaphandle Inetha elifana negridi (ikakhulukazi livaliwe isiyingi) iyisivikeli somoya se-generator, esivikela izindwani zabalandeli ukuvimbela izinto ukuthi zingawi emaceleni abalandeli .
Ikhava yabalandeli bezimoto nekhava yefeni yejeneretha ngokuhlanganyela ibizwa ngokuthi ikhava yabalandeli bezimoto. Kunemisebenzi emibili: 1. Izinga lokuvikelwa kwe-IP, njenge-IP54, inombolo yokuqala ukuvikela okuqinile ekucwiliseni kuleli cala nokuvikela abantu ukuthi bangathinti izingxenye eziyingozi kuleli cala. Isivikelo somoya ukuvimbela izinto zangaphandle ukuthi zithinte ifeni. Inombolo yesibili imele ikhono lokuvikela uketshezi. 2. Lawula umgudu womoya. Ngoba ifeni izipholile, uma kunesivikelo somoya, i-windshield izoshaywa ize ifike ekugcineni kuka-D ngegebe (ukusatshalaliswa okuyindilinga) phakathi kwefasitela lomoya kanye nesinki sokushisa, ngaleyo ndlela kususe ukushisa kusinki wokushisa. Uma kungenasivikelo somoya, umoya we-fan awunasiqondiso, futhi umphumela wokushiswa kokushisa ubi kakhulu.
Noma kunjalo, kufanelekile ukusikhetha!
Siyinkampani ekhiqiza imikhiqizo yochungechunge lokupholisa fan. Ngemuva kweminyaka yentuthuko, inkampani izuze ukwethenjwa ngamakhasimende amaningi amakhulu ahleliwe ngemikhiqizo esezingeni eliphakeme nezinsizakalo ezinhle kakhulu. Iminyaka eminingi yesipiliyoni sokukhiqiza ukukunikeza ngemikhiqizo emihle.
Kusukela yasungulwa, inkampani ibihlala ihambisana nomgomo wokuphatha onamathalente, iqoqele izimboni ezikhethiwe, yahlanganisa ubuchwepheshe bolwazi lwangaphandle oluphambili, izindlela zokuphatha, kanye nemisebenzi yezinkampani neqiniso elithile lezinkampani ezihlinzeka izinkampani uhla olugcwele lwezixazululo.
Inani le-odaOne PieceIzingxenye ezimbiliAma-Piece amathathuZonke izintokwamukelekile.
Samukela bonke ubuningi ngisho nocezu olulodwa esizokuthumela lona. Kukhona isitoko esikhulu salezi zingxenye zemikhiqizo endaweni yethu yokugcina izimpahla futhi ingxenye eyodwa noma ezimbili akuyona inkinga kithina. Okwe-courser, inani elikhulu, intengo engcono. Siphakamisa uku-oda ngangokunokwenzeka.
Ukukhokha kungaba iTransgraphic Transfer noma i-Paypal Noma ikhadi lesikweletu noma i-Alipay. Sinesipiliyoni seminyaka engaphezu kwama-30 ngokuhweba kwamanye amazwe kanye nokukhokha okuningi esingakwamukela. Sizokuthumelela ama-akhawunti ethu uma usuthathe isinqumo sokuthi uzosikhokhela kanjani.
Indlela yokulethwa ngezindlela ezahlukahlukene injengomoya, noma ulwandle noma umnyango nomuzi ngeposi. Ngobuncane obuncane, siphakamisa ukuthi kuthunyelwe ngomoya noma nge-e-mail ngoba ama-cargo agents asolwandle awathandi ama-cargos amancane esisindo ngaphezulu kwe-100kg ngezansi. Futhi, isikhathi sokuhamba sincike kwindlela oyikhethayo futhi sizokunikeza izeluleko ezithile uma usune-oda yendawo.
Singabanye bama-ejenti amaningi wemikhiqizo edumile emhlabeni wonke eChina futhi siqinisekisa ukuthi zonke lezi zingxenye zomkhiqizo esizithengisayo zangempela. Kukhona ikhodi ye-QR ezingxenyeni nakho konke ongakubheka kusuka kuwebhusayithi esemthethweni yemikhiqizo.